Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle Oo Cambaareeyey Weerarradii Lagu Qaaday Sucuudiga - Jigjiga Online
HomeSomalidaMadaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle Oo Cambaareeyey Weerarradii Lagu Qaaday Sucuudiga
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle Oo Cambaareeyey Weerarradii Lagu Qaaday Sucuudiga
Djibouti (JigjigaOnline) – Madaxweynaha dalka Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geele ayaa ka hadlay weerar dhowan lagu qaaday xarumo muhiima oo ku yaala dalka Sacuudiga.
Madaxweyne Geelle ayaa waxa uu si adag u cambaareeyay weeraradaas oo lagu qaaday xarumo laga soo saaro shidaalka oo ku yaala Magaalada Riyadh.
Geelle ayaa waxa kale oo uu taageero u muujiyey shirarka iyo kulamada uu Sacuudigu u qabto dunida Carabta iyo Islaamakaba, isagoo ku tilmaamay dalka Sacuudiga inuu yahay hogaamiyaha dalalka Carabta iyo dunida Islaamka.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayaa waxa uu kaga hadlay arrimahaasi wareysi gaar ah oo uu siiyey wargeyska Sacuudiga ah ee Asharq Al-Awsat, wuxuuna yidhi:
“Sucuudigu waa hoggaamiyaha Carabta iyo dunida Islaamka. Dhibaato kasta oo loo gaystaa waxay la macno tahay weerar lagu soo qaaday dunida Muslimka iyo Carabta. Kelmadaha ugu culus ayaanu ku cambaaraynaynaa weerarkaas”.
“Weerarkii diyaaradaha drone-ka ee dhawaan lagu soo qaaday dhuumaha shidaalka waanu cambaaraynaynaa, sidoo kalena weerarro kale oo lagu qaaday Makkah iyagana waanu cambaaraynaynaa”.
Wuxuuna intaas ku daray “Is afgaradka Sacuudigu ka abuuray Jabuuti iyo Ereteriya wuxuu sababay inuu soo noqdo xidhiidhkii, lana dhiso xidhiidh is aaminaad ah. Waxaana rajeynayaa in is-fahamkaasi bilowday uu sabab u noqdo in la calaamadiyo xuduudaha ay ku muransan yihiin Ereteriya iyo Jabuuti”.
Madaxweyne Geele ayaa waxa uu ugu dambeyntii uu ku sheegay wareysigiisa in dowlada Jabuuti ay door muhiim ah ka ciyaarto daminta khilaafaadka gobalka iyo bariga Afrika, isagoo xusay inay dowladiisu ay si dhow ula socoto xaaladaha ka aloosan dalka Sudan.
Dareen ka dhashay Muslimiinta ilaalisa masaajidda Maraykanka
DIGNIIN: Haddii Aad Doonayso Inaad Ubad Dhasho, Ha Badsanin Jimicsiga